ललितपुर वडा नम्बर १६ सम्पदा... :: शान्ति तामाङ :: Setopati
ललितपुर वडा नम्बर १६ सम्पदा संरक्षण अभियानमा, स्थानीय भन्छन्- काखापाखा भयो
शान्ति तामाङ ललितपुर, साउन २९
पाटन दरबार परिसरमा भइरहेको पुनर्निर्माण। तस्बिरः नारायण महर्जन
सिंहदरबार टाढा छ। पर्खालभित्र बन्द। चौबीसै घन्टा सुरक्षाकर्मीको पहरा। त्यहाँसम्म जनताको आवाज पुग्दैन।
नजिकको सरकार जनताकै अगाडि छ। छरछिमेकमै। वडा कार्यालय। यहाँका जनप्रतिनिधि जनताका काम गर्न आएका हुन्। सुरक्षाकर्मीको पहरा छैन। जनताको आवाज सजिलै पुग्छ।
उनीहरुले आफ्ना आवाज पुर्‍याए त?
हामी 'सिंहदरबार बाहिरका सरकार' शृंखलाको दोस्रो संस्करण सुरु गर्दैछौं। यसमा हामी वडा कार्यालयका प्रतिनिधि र स्थानीयसँग भेट्नेछौं। जनताका समस्या वडाले सुन्छ कि सुन्दैन? जनताको नजिकको सरकार उनीहरुसँग नजिक छ कि सिंहदरबार जत्तिकै टाढा? के गर्दै छन् यहाँका जनप्रतिनिधि?
शृंखलाको यो अंकमा ललितपुर महानगरपालिका, वडा नम्बर १६ ।
सम्पदा र संस्कृतिले सहरमा प्राण भर्छ। यस अर्थमा ललितपुरको प्राण हो, वडा नम्बर १६।
यहाँ कलाकृति र जीवित संस्कृतिको भण्डार छ। पाटन दरबार क्षेत्रका कृष्ण मन्दिर, भिमसेन मन्दिर, हिरण्यवर्ण, यशोधरवर्ण, रत्नाकर महाविहारजस्ता मूर्त सम्पदा छन्। बज्रयानी बौद्ध संस्कृति, भिमसेन जात्रा, मतयाः कृष्णपूजा, अष्टमातृका नाच, नरसिंह जात्रा, कात्तिक नाचजस्ता अमूर्त सम्पदा यहीँ छन्।
यस्ता पुरातात्विक संरचनाले घेरिएको टोल। साँघुरा गल्ली। पाइला पाइलामा मन्दिर। परम्परागत पहिरनमा सजिएका बूढापाका। सँझ्या: र टिकी झ्या: ले सुसज्जित पुराना घर।
मल्लकालीन सभ्यता र संस्कृतिको कथा भन्ने यी धरोहर संरक्षण जिम्मा यहाँका जनप्रतिनिधिलाई छ।
वडाध्यक्ष निर्मलरत्न शाक्य यी मूर्त र अमूर्त सम्पदा संरक्षण आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउँछन्।
ललितपुर महानगरपालिका, वडा नम्बर १६ का वडाध्यक्ष निर्मलरत्न शाक्य। तस्बिरः सेतोपाटी
‘विकास निर्माणका काम छँदैछ, त्योभन्दा बढी हामी सम्पदा र संस्कृति जोगाउनमा केन्द्रित छौं,’ शाक्यले भने, ‘सम्पदा मासिएको दिन हामीले आफ्नो परिचय गुमाउँछौं। वडा नम्बर १६ को मुख्य दायित्व ललितपुरको साँस्कृतिक परिचय जीवित राख्ने हो।'
यही उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको उनले बताए।
उनका अनुसार नेवारी संस्कृति, परम्परागत बाजागाजा, जीवनशैली, नेपाल भाषा र लिपि संरक्षण गर्न 'नेवार लघु साँस्कृतिक संग्रहालय' स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ। ललितकला, काष्ठकला र हस्तकला प्रवर्द्धन गर्न मेला आयोजना गरिँदैछ।
वडाले गत वर्ष नगरपालिकाबाट ५० लाख बजेट पाए पनि करिब तीन करोडको काम भएको शाक्यले बताए। यो वर्ष १ करोड ५० लाख बजेट पाएको छ।
भुइँचालोमा भत्किएका मन्दिर पुनर्निर्माण वडाको अर्को प्राथमिकता हो। काठमाडौं उपत्यका संरक्षण प्रालि (केभिपिटी) ले पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पूरा हुने शाक्यले बताए। उनका अनुसार दरबार क्षेत्रमा ८० प्रतिशत काम सकिएको छ।
यति हुँदाहुँदै वडाकै कार्यक्षेत्रमा पर्ने अन्य थुप्रै काम अलपत्र देखिन्छन्।
वडाध्यक्षले सम्पदालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै गर्दा वडा कार्यालय अगाडिकै धौगल बजार भने अस्तव्यस्त छ। मासु काटेर बेचबिखन गर्ने त्यहीँ, कुखुरा, हाँस चर्ने त्यहीँ। दैनिक उपभोगका सामान बेचबिखन त्यहीँ, फोहोरको थुप्रो त्यहीँ।
हामीले सोध्यौं, 'धौगल बजार व्यवस्थित गर्नु वडाको काम होइन?'
‘पुनर्निर्माणका लागि नक्सा डिजाइन भइसकेको छ,’ उनले जवाफ दिए, 'यो वर्षको नगरस्तरीय योजनामा परेको छ।'
हामीले वडा गतिविधिबारे स्थानीयसँग पनि कुराकानी गरेका थियौं।
लक्ष्मीदेवी बज्राचार्य जनप्रतिनिधि आएपछि झमेला कम भएको बताउँछिन्। उनी विधवा भत्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न वडा कार्यालय गएकी थिइन्। छिनभरमै काम भयो। यसअिघ नगरपालिका जानुपर्दा अनेक झमेला बेहोर्नुपर्थ्यो।
'साना गल्लीको बाटोमा फोहोर देखिन छाड्यो। पसलअगाडि बिग्रिएको बाटो बन्यो। सम्पदा र संस्कृति संरक्षण भइरहेको छ। गुनासो गर्ने ठाउँ पाएका छौं। योभन्दा अगाडि कहाँ सम्भव थियो?' उनले भनिन्।
स्थानीय प्रवीण शाक्यले पनि जनप्रतिनिधि आउनु र नआउनुमा 'आकाश-पाताल फरक’ भएको बताए।
‘धेरै काम सजिलो भएको छ। प्रशासनिकदेखि विकास निर्माणमा समेत सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचित भएर आउनेबितिकै उहाँहरुले वडाबासीलाई भेला गरेर कहाँ के के गर्ने छलफल गर्नुभयो। मेलम्चीले ल्याएको समस्या आफैं अवलोकन गरेर हल गर्नुभयो।'
पछिल्लो समय विभिन्न बहालदेखि मंगलबजार, गोल्डेन टेम्पल सरसफाइ, मन्दिरमा रंगरोगन गर्ने काम भएको उनले जानकारी दिए।
‘सम्पदा संरक्षणमा पहिलेभन्दा तीन गुना बजेट बढेको छ। एकैचोटि त सकिँदैन नि। जनप्रतिनिधि नभएको भए यत्ति पनि हुँदैन थियो होला,’ उनले भने।
मंगलकृष्ण शिल्पकार भने वडाको कामबाट त्यति सन्तुष्ट छैनन्।
उनको टोलमा ढलको समस्या आएको दुई वर्ष भयो। वडालाई जानकारी गराए। सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछन्। 'नगरपालिका कर्मचारीले लापरबाही गरेजस्तो लाग्छ,’ शिल्पकारले भने, ‘वडाले समस्या समाधान गर्ला भन्ने आस छ।’
वडा कार्यालय परिसरमै भेटिएका शम्भु गिरी जनप्रतिनिधिबाट केही काम नभएको आरोप लगाउँछन्।
‘वडाबाट सय मिटर मात्र पर छ हाम्रो टोल। काम भएको भए देखिन पर्ने हो,’ उनले गुनासो पोखे, ‘हामीले धेरै पहिलेदेखि टोल सरसरफाइका लागि पहल गरेको, अहिलेसम्म भएको छैन। वडाले काम गरेको छ भन्ने कि नभन्ने?’
‘पशुपतिभन्दा पुरानो तिलिङ्गेश्वर महादेव मन्दिर हाम्रै टोलमा छ। त्यसको संरक्षण भएको छैन। वडाले सम्पदा संरक्षणमा के राम्रो काम गर्यो भन्नु? सम्पदा क्षेत्रभित्रै काखा र पाखा छ,’ गिरीले भने।
ज्ञानलाल महर्जन पनि जनप्रतिनिधिले 'माखो नमारेको' बताउँछन्।
टोलमा जनसेवा युवा परिवारको भवन बनाउन वडामा दुई महिनाअघि निवेदन दिए पनि काम नभएको उनले गुनासो गरे। 'वडा कार्यालय नजिकै भएर पनि केही प्रगति हामीले देखेका छैनौं,' उनले भने।
वडाध्यक्ष शाक्य भने आफू आएपछि आमुल परिवर्तन भएको दाबी गर्छन्। बाह्र हजार जनसंख्याको वडामा विकास निर्माणदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत ३१ थरीका वडास्तरीय कार्यक्रम गरिएको उनले बताए।
'वडाको खासै आयस्रोत छैन। जे कामलाई पनि नगरपालिकाकै भर पर्नुपर्छ। त्यसैले भनेजस्तो काम गर्न नसकेको हुन सक्छ,' उनले भने, 'हामीले योजनाअनुसार काम थालेपछि देखिने गरी प्रगति हुनेछ।'
काठमाडौं वडा नम्बर ४ मा ५४ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमुक्त, हरियाली पार्क बनाइँदै
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ३०, २०७५, १०:०३:००
सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार बढायोः देउवा
प्रदेश नम्बर १ मा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक पेश